आँचल हाँस्दा रिसाउने को ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
आँचल हाँस्दा रिसाउने को ?
चुलबुले स्वभावकी अभिनेत्री आँचल शर्माले गएको वर्ष घरजम बसाइन् । डा. उदिप श्रेष्ठसँग दुई वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई उनले विवाहमा परिणत गरेकी हुन् । आफ्नो तौल घटाउने टिप्स लिन उनी फेसबुकको माध्यमबाट उदिप श्रेष्ठसँग जोडिएकी थिइन् । अन्ततः उनै आँचलका जीवनसाथी बने । गएको फागुन अन्तिममा विवाह गरेका उनीहरु लकडाउनका कारण हनिमुनमा निस्कन पाएका छैनन् ।
धेरै समय अगाडि उनले एक अन्तर्वार्तामा तराजुमा टाउको मात्र राखे टाउकोको तौल थाहा हुने भन्दै दिएको जवाफको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनलाई विद्वान अभिनेत्री भन्दै मजाक उडाएका छन् । तर, यसअघि पनि आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर ट्रोल बनेका कारण आँचललाई यी कुरा पचाउने बानी परिसकेको छ ।